Azonao atao ve ny manampy ahy hahatakatra ny tombontsoa lehibe avy amin'ny tranokalan'ny PR ho an'ny backlinks?
Mazava ho azy, raha tianao ny mankafy ny fivoarana marina sy azo ekena ao amin'ny SEO, dia ilaina ny manangana rohy malaza amin'ny tranokalanao na ny blôginao.Amin'izao fotoana izao, misy antony telo lehibe mahatonga ny "idealy" mombamomba ny backlinks - ny maha-zava-dehibe azy, ny plurality ary ny kalitao. Raha ny fahitako azy, ireo rohy kalitao rehetra dia manangana ny fomba voajanahary ary avy amin'ny loharano azo itokisana miaraka amin'ny pejy PageRank, tompon'andraikitra momba ny sehatra, pejy fahefana, sns.Saingy midika ve izany fa tsy maintsy maka ny tranokala avo lenta ho an'ny backlinks ianao?
Mino aho fa tsia, tsy izany. Nahoana? Satria ny zava-misy dia somary sarotra kokoa. Midika izany fa manana tranokala avo lenta maro ho an'ny backlinks araka izay azo atao ianao dia tsy hamela velively anao na aiza na aiza. Ny tena marina dia mora kokoa ny mahazo PR9 vaovao na angamba Backlink PR10, ohatra avy amin'ny WordPress. Afaka vita avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny minitra - ary vita ianao. Noho izany, mety ho toy izany ve ny bakeraly toy izany, inona no hevitrao? Raha ny marina, tsy misy na inona na inona manamarina ny takelaka vaovao napetraka vao haingana. Midika izany fa ny anton-taratasy misaraka tsirairay dia ho tsy misy dikany ary tsy misy raha tsy hoe ho lasa ampahany organika amin'ny rohy mampiavaka ny rohy. Izany no mahatonga ahy manolotra sombin-dahatsoratra amin'ny sehatra maro hanamboarana rohy amin'ny toerana maromaro, izay tokony hanana fahasamihafana samihafa, mazava ho azy, anisan'izany ny sombin-tsarimihetsik'i PageRank.
Na dia izany aza, mbola zava-dehibe tokoa ny manana tranokala avo lenta ho an'ny backlinks. Ny zavatra dia ny fampiasana fitaovam-piadiana lehibe toy ny Google mihitsy no mampiasa fotodrafitr'asa telo (i. f. , ny maha-zava-dehibe, ny fahasamihafana ary ny kalitao - ny ampahany dia nanampy tamin'ny fananana PR) mba hamaritana ny lanjany sy ny valiny marina ho an'ny rakitra rehetra ao amin'ny pejin'ny tranonkala. Diniho ireto tombontsoa lehibe manaraka ireto amin'ny fampiasana tranokala avo lenta ho an'ny backlinks. Tadidio anefa fa ho afaka hankafy azy ireo ianao raha tsy manana ny votoatiny avo lenta sy madio.
Jereo tsara ny tranokalanao na ny blôgy, araka ny fomba fijerin'ny mpamorona lehibe toy ny Google
Main Benefits of High Backlinks tenany, sy Yahoo ary Bing.
Ny fifamoivoizana mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny tranonkalanao, mazava ho azy fa raha ampy tsara ny votoatiny avo lenta sy madio, mba hahasarika ny tombontsoa avy amin'ny mpampiasa tena hividy ny tranokalanao na ny bilaoginao.
Ny fahamendrehana matanjaka sy ny fitokisana avy amin'ireo loharanom-pahefana hafa mifandray amin'ny loharanom-pejy amin'ny pejy SideRank dia ho takatry ny Google ho toy ny singa manan-danja mahomby, ka mahatonga ny tranokala na ny bolongana mendrika amina toerana ambony kokoa SERPs.
Ny toerana ambony ny laharam-pitadiavana dia manome fahafahana tsara hampitombo ny fitomboan'ny fifamoivoizana amin'ny Internet, ka mampiseho ny hazavana maitso ho an'ny fisalasalana bebe kokoa amin'ny fikarohana an-tserasera, ary koa ny mampitombo ny mpanjifa mety ho an'ny tena izy, amin'ny farany amin'ny fivarotana lehibe amin'ny ambaratonga.
Mamolavola ny fahatsiarovan-tenan'ny daholobe, manatsara ny fanatrehanao ny aterineto ary mitondra anjara biriky amin'ny marika malaza amin'ny raharaham-barotrao Source .